नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : विजयादशमीका दिन : राष्ट्रपति रामवरण VS पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, फोटो भिडियो हेर्नुस् आफै मुल्याङ्कन गर्नुस् कस्को मा बढी गए टिका लगाउन नेपालीहरु !
विजयादशमीका दिन : राष्ट्रपति रामवरण VS पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, फोटो भिडियो हेर्नुस् आफै मुल्याङ्कन गर्नुस् कस्को मा बढी गए टिका लगाउन नेपालीहरु !
डिसी नेपाली समाजले पनि यसरी मनायो दशै (हेर्नुस यसै समाचारको पुछारमा)
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विजयादशमीका दिन अपराह्न १२:३० बजेदेखि सर्वसाधारणलाई टीका लगाइ दिए, त्यस्तै गरि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि अपरान्ह ३ बजेदेखि सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिए । - source : फोटो र भिडियो दिपेश राजथारु। Dcnepal
डिसी नेपाली समाजले पनि यसरी मनायो दशै
- Bishwaraj Thapa/Enepalese.com
र अन्त्यमा दसैं का अन्य केही झलक पनि